တရားႏွင္႔ ဂါထာေတာ္မ်ား Archives - Latest Myanmar News
September 27, 2021 by Latest Myanmar News
နောင်ပွင့်တော်မူမည့်ဘုရားရှင်နှင့်မတွေ့နိုင် မဖူးထိုက်သူ(၇)ဦး နောင်ပွင့်တော်မူမည့် ဘုရားရှင်နှင့် မတွေ့နိုင်သူ၊ မဖူးထိုက်သူ (၇)ဦး အကြောင်းတွေကိုသိပြီး ဆင်ခြင်နိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်… ၁။ ထူပါဘေဒ စေတီ၊ ပုထိုး၊ ဘုရားရုပ်ပွားတော်၊ ကျောင်းကန်များ ဖျက်စီးသောသူ..။ ၂။ ဗောဓိဘေဒ ဘုရားမှီပြီး ပွင့်ရာဖြစ်တဲ့ ဗောဓိညောင်ပင်ကို ဖျက်စီး ပျက်စီးသောသူ..။ ၃။ အာရာမဘေဒေ ဘုရားစာ၊ တရားစာ၊ ယုတ်စွအဆုံး နမောတဿ ပါသော ဖိတ်စာတောင် အိမ်သာထဲ အသုံးပြု ဖျက်စီးသောသူ…။ ၄။ ဘိက်ခူဘဒေ ရဟန်းသံဃာ အချင်းချင်း တစ်ပါးနှင့် တစ်ပါး မတည့်အောင် ဂုံးတိုက်၍ သံဃာ သင်းခွဲသောသူ..။ ၅။ ဘိက္ခူနီဘေဒ ဘုရားလက်ထက်၌ ဘိက္ခူနီမ ( ယနေ့ခေတ်တွင် သီလရှင် ယောဂီမ )တို့အား အရှက်တကွဲ၊ … Read more
အိမ်မှာ အထိအခိုက်တခုမှ မရှိရအောင် ပဋ္ဌာန်းရွတ်မိတိုင်း ဒီလိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ
July 14, 2021 by Latest Myanmar News
July 12, 2021 by Latest Myanmar News
နေမကောင်းတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ခြံဝမှာ ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေက စားစရာများလာရောက်ချိတ်ဆွဲပေးထားကြသော ပုံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းပုံပိုင်ရှင်အား လေးစားလျှက် မေတ္တာဟူသည် သူတစ်ပါးတို့ကို ကြီးပွားစေလို၊ ချမ်းသာစေလိုသောသဘောပေတည်း။ ထို့ကြောင့် မြင့်မြတ်သော စိတ်ဓာတ်ရှိသူတို့သည် မိမိအပေါ်၌ သူတစ်ပါးက မတော်မတရား ပြုထားစေကာမူ ထိုသူ၏အပြစ်အနာအဆာ ကို(လက်စားချေမည်ဟု) မရှုတော့ဘဲ အကြောင်းကိစ္စပေါ်လာလျှင် ကိုယ်ကသာ သူ့အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ကြလေသည်။ (အရှင်ဇနကာဘိ၀ံသ ၊ ရုပ်စုံဗုဒ္ဓဝင်အမေးအဖြေ ၊ နှ – ၃၀) မေတ္တာဆိုတဲ့ ပါဠိရဲ့အနက်ကို ချစ်ခြင်းလို့အနက်ပြန်ကြပါတယ်။ အချစ်က သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ၁။ ချစ်သူအချစ်ရယ်၊ ၂။ မိသားစုအချစ်ရယ်၊ ၃။ ပါရမီအချစ်ရယ်ပါ။ ချစ်သူအချစ်ဆိုတာက မိန်းမယောက်ျား အပြန်အလှန် ချစ်ကြတဲ့အချစ်ပါ။ မိသားစုအချစ်ဆိုတာက မိဘနဲ့သားသမီး၊ ညီနဲ့အစ်ကို၊ မောင်နဲ့နှမ စသည်တို့ မိသားစုအိမ်သား အချင်းချင်း ချစ်ကြတဲ့ … Read more
ဇနီးဖြစ်သူဆွမ်းလောင်းလျှင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကုသိုလ်ထပ်တူရပါသလား? ” မရပါဘူး “အမျိုးသားတွေ အထူးသတိပြုစရာ ကောင်းတဲ့ အချက်ပါပဲလို့ စာမှာ ဆိုပါတယ်။ အချို့ကတော့ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ရှာထားတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ လှူဒါန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် မိန်းမလှူရင် ယောင်္ကျားလဲ ထပ်တူကုသိုလ်ရတယ်လို့ ထင်နေကြပါတယ်။ ပစ္စည်းကို ဘယ်သူရှာတယ် ဘယ်သူပိုင်တယ် ဆိုတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သေလို့ သပိတ်သွတ်တဲ့အခါသေသူပိုင်တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့လှူလို့ သေသူ ကုသိုလ်မရပါဘူး။ သာဓုခေါ်နိုင်တဲ့ ပြိတ္တာဘဝရောက်လို့သာဓုခေါ်နိုင်တဲ့ နေရာမှာရောက်နေလို့ သာဓုခေါ်ဆိုခွင့်ရမှသာ သာဓုခေါ်တဲ့ ပတ္တာနုမောဒန ကုသိုလ်သာရပြီးအကျိုးခံစားရတယ်လို့ စာမှာဆိုထားပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် သူ့ပစ္စည်းကိုလှူလို့ သူကုသိုလ်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် ၊ လှူဖွယ်ပစ္စည်း ပေးလှူတဲ့စေတနာ ၊ ပေးလှူခြင်းဆိုတဲ့ ဒါနအင်္ဂါလေးပါးရှိပါတယ်။ ဒါနပြုရာမှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ပေးလှူတဲ့ စေတနာမရှိတဲ့အတွက် ကုသိုလ်မရခြင်း … Read more
Categories တရားႏွင္႔ ဂါထာေတာ္မ်ား Tags အဆင်မပြေသူ
May 11, 2021 by Latest Myanmar News
Categories တရားႏွင္႔ ဂါထာေတာ္မ်ား Tags မနက်စောစေ
၁။ ပန်း ဘာကြောင့် ကပ်ရသလဲ? ၂။ ပန်းအိုး ဘယ်နှစ်အိုး ထားသင့်ပါသလဲ? ၁။ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဇေတဝန်ကျောင်း ဂန္ဓကုဋီတိုက်တော်မှာ သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ ရဟန်း ရှင် လူအများ ဘုရားဖူးတရားနာလာကြကုန်၏။ ခရီးကပမ်း လမ်းကကြမ်းသောကြောင့် ချွေးသီးချွေးပေါက် အသွယ်သွယ် ဖုန်အလိမ်းလိမ်းနှင့်ပေါ့။ တချို့မှာ ချွေးနံ့တထောင်းထောင်းနှင့် ဘုရားရှင်သီတင်းသုံးရာ ဂန္ဓကုဋီတိုက်တော်တခုလုံး အနံ့အသက်တွေကမကောင်း။ ဒါကို သတိပြုမိတဲ့ ညီတော်အရှင်အာနန္ဒာစသော ရဟန်းရှင်လူတွေက ဘုရားနဲ့ တရားနာပရိသတ်အကြားမှာ ပန်းနံ့သာတွေကို ထားခဲ့ကြတယ်။ ဘုရားပန်းတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေဆီက ချွေးနံ့တွေ ဘုရားဆီမရောက်တော့ဘူးပေါ့။တရားနာပရိသတ်တွေလည်း ပန်းနံ့လေးတွေရ ပန်းတွေကိုမြင်ပြီးအမောတွေပြေ စိတ်တွေကြည်လင်လာတယ်။ တရားနာရတာလည်း အရင်ကထက် ကြည်ကြည်နူးနူးရှိလာတယ် ။ထိုအချိန်မှစ၍ ဘုရားပန်းလှူတဲ့ဓလေ့က စတင်လာတယ်။ ပန်းပန်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်မာလာဂန္ဓ ဝိလေပနဆိုတဲ့ သီလနဲ့လည်း ငြိစွန်းမှုမရှိတော့ဘူး အပြစ်ကင်းတယ်။ … Read more
March 23, 2021 by Latest Myanmar News
ကပ်ဘေးဆိုက်တဲ့ အခါ (၁) ငါးပါးသီလ မြဲခြင်း (၂) အသားငါး စားသုံးမူနည်းခြင်း (၃) ပရိတ်ရွှက်ပုံနေရာ ကျခြင်း တို့ဟာကပ်ဘေးကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်ခြင်းပဲတဲ့ကပ်ဆိုက်တယ် ဆိုတာ လူသားတွေလောဘ၊ ဒေါသ ၊ မောဟတွေ များလို့သဘာဝတရားကြီးက ရပ်တန့်သွားအောင်ပညာပေးတာ…. ငါးပါးသီလ လုံခြုံအောင်စောင်ထိမ်းခြင်းရဲ့ အကျိုးကိုသိပ္ပံကိရိယာတွေနဲ့ တိုင်းလို့မရဘူးကမ္ဘာလောကဓါတ်ကြီးဟာ သတ္တဝါတွေရဲ့ ကံတရားအတိုင်း ဖြစ်တည်နေတာဘုရားရှင်တွေ မပွင့်တဲ့ အချိန် သာသနာပကာလမှာလည်းလူသားတွေ ငါးပါးသီလ လုံခြုံကြလို့ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ ဝဠာဟာကဆိုတဲ့ ရာသီဥတုကိုစောင့်ကြပ်ပေးကြတယ် ၊အဲဒီအတွက် အငတ်ဘေး မဆိုက်ဘူး လူသားတွေ သီလပျက်ပြီ ဆိုရင်စဠာဟာကနတ်တွေဟာ သွားမြဲလမ်းက မသွားပဲတခြားလမ်း သွားတယ် အဲဒီအတွက် ဥတုတွေ ဖေါက်ပြန်တယ် ၊ လူသားတွေ ဥတုမမှန်တော့လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာ ခက်ခဲကုန်တယ်ပြောချင်တာက ငါးပါးသီလ စောင့်ထိန်းတဲ့ အကျိုးဟာနည်းနည်းနောနောမဟုတ်ဘူး … Read more
ကပ်ကြီး သုံးပါးကို ကျော်နင်းနိုင်စေမည့်် ဂါထာ
March 21, 2021 by Latest Myanmar News
သိရသ္မိံဂါထာတော် ၁။ သိရသ္မိံမေ ဗုဒ္ဓသေဋ္ဌော၊ သာရိပုတ္တောစ ဒက္ခိဏေ ။ ဝါမအံသေ မောဂ္ဂလ္လာနော၊ ပုရတော ပိဋကတ္တယံ ။ ၂။ ပစ္ဆိမေ မမ အာနန္ဒော၊ စတုဒ္ဒိသာ ခီဏာသဝါ ။ သမန္တာ လောကပါလာစ ၊ ဣန္ဒာဒေဝါ သ ဗြဟ္မကာ ။ ၃။ ဧတသေံံ အာနု ဘာဝနေ၊ သဗ္ဗေဘယာ ဥပဒ္ဒဝါ ။ အနေက အန္တရာယာပိ ၊ ဝိနဿန္တု အသေသတော ။ ၁။ ဗုဒ္ဓသေဋ္ဌော – ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် မေ – တပည့်တော်၏။ သိရသ္မိံ– ဦးခေါင်းထက်၌။ တိဋ္ဌတု … Read more
Categories တရားႏွင္႔ ဂါထာေတာ္မ်ား Tags ကပ်ကြီး သုံးပါး
ကြေးစည်တီး အမျှဝေခြင်း အကျိုး
March 20, 2021 by Latest Myanmar News
ကြေးစည်တီးခြင်း၏အကျိုး ဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်း ကြေးစည်တီးပြီး အမျှပေးဝေကြပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့…ကြေးစည် ဆိုတာ…သူတော်ကောင်းတို့၏ နားတွင်အေးမြသော အသံရှိ၏။ သူယုတ္မာ (နာနာ ဘာဝ)တို့၏နားတွင်ပူလောင်သော အသံရှိ၏။ ကောင်းသော သူတို့သည် သာဓုခေါ်ပြီး မကောင်းသော သူတို့သည်အဝေးသို့ ပြေး၏။ ကြေးစည်သည်အအေးဓာတ်ကို ပေးသဖြင့်ကိလေသာအပူကိုငြိမ်းစေပါတယ်။ မိမိမှာ…ကံဆိုးနေပြီကံ ညံ့နေပြီ ထင်လျှင်တော့ပို၍ တီးပေးသင့်ပါသည်။ ဒီလို တီးခြင်းဟာ…ကိုယ့်ကို မကောင်းကြံမဲ့ သူတွေကိုဝေးကွာ သွားစေပါတယ်။ အမျှဝေရာတွင်လည်းလူ၏ အသံအားဖြင့်အမျှဝေသည့်အခါအဝေးသို့ မရောက်နိုင်ပါဘူး။ ကြေးစည်ကသာအဝေးသို့ပဲ့ တင်သံဖြင့် သွားနိုင်ပါတယ်။ အဝေးတွင်ရှိသောနတ် လူတို့ ကြားနိုင်သလိုသာဓုလည်း ခေါ်နိုင်တယ်။ ကြေးစည်တီးပြီး မေတ္တာပို့အမျှဝေလျှင်ပို၍ ထိရောက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်…ဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်းကြေးစည်တီး၍ အမျှဝေပါ။ မေတ္တာဖြင့်… အရှင်ပုည( ဝကုန်း ) Zawgyi ေၾကးစည္တီးျခင္း၏အက်ိဳး ဘုရားရွိခိုးၿပီးတိုင္း ေၾကးစည္တီးၿပီး အမၽွေပးေဝၾကပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ … Read more